Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पाकिस्तानको कराचीमा यात्रुवाहक विमान दुर्घटना – Emountain TV
एजेन्सी, ९ जेठ। पाकिस्तानको कराचीमा एउटा यात्रुवाहक विमान दुर्घटनामा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । पाकिस्तान इन्टरन्याश्नल एअरलाइन्सको उक्त विमान लाहोरबाट आएको र कराची विमानस्थलनजिकै दुर्घटनामा परेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यमका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक पीआईएको विमान अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । ए ३२० मोडेलको सो विमानमा ९१ जना यात्रु रहेका थिए ।
सो विमान दुर्घटनामा परेपछि धुँवाको मुस्लो देखिएको भिडिओ पाकिस्तानी टिभीले प्रसारण गरेका छन्। दुर्घटनास्थल मानवबस्तीनजिकै भएको बताइएको छ।
पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन निकायले दुर्घटनाको पुष्टि गरेपनि जनधनको क्षतिको बारेमा बताएको छैन । पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अवरुद्ध आन्तरिक वायुसेवा दुई महिनापछि हालै सञ्चालनमा आएको थियो।